सरकारलाई गगन थापाको प्रश्न : ‘डा. केसी जनताको स्वास्थ्यका लागि लड्नु कम्युनिस्ट विरोधी हुनु हो र ?’ – Everest Times News
सरकारलाई गगन थापाको प्रश्न : ‘डा. केसी जनताको स्वास्थ्यका लागि लड्नु कम्युनिस्ट विरोधी हुनु हो र ?’
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले वर्तमान सरकारलाई डा. गोविन्द केसी जनताको स्वास्थ्यका शिक्षा क्षेत्रका लागि लड्नु कम्युनिस्ट विरोधी नभएको बताए ।
बिहिवार राजधानीको बागबजारस्थित होटल हार्दिकमा थापाले एक पत्रकार सम्मेलन गरि डा.केसी कुनै पनि हालतमा कम्युनिस्ट विरोधि नभएको किटान गर्दै उनले डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका निम्ती पटक पटक अनसन बस्दा सरकारमा को छ भनेर कहिल्यै नहेरेको पनि प्रष्टपारे ।
डा. केसी १६औं पटको अनसन ९ दिनदेखि इलाममा बसिरहेका छन् । उहाको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भइसकेको छ तर, सरकारले औपचारिक सम्वाद समेत सुरु नगरेको भन्दै थापाले सरकारप्रति गुनासो समेत पोखे ।
प्रधानमन्त्रीको केवल एउटा आदेशले नै डा.केसीको बिग्रदै गएको स्वास्थ्य स्थिती सुध्रिने र माग पनि पूरा हुने धारणा व्याक्त गर्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको एउटा आदेशले डा. केसीसंग भएको सम्झौता अनुसार सहजै विधेयक पारित हुनसक्छ । प्रधानमन्त्री ज्युले यस विषयलाई चाडै बुझ्न जरुरी छ ।’
उनले डा. गोविन्द केसी एउटा मात्र हैन सय जनाको संख्यामा हुनु पर्ने जिकिर गर्दै भने, ‘नेपालको चिकित्सा क्षेत्रसुधारको निम्ती डा. केसी अनसन बस्दा कतिले भन्छ लाज लाग्नु पर्ने, लाज त हामीलाई पो लाग्नु पर्ने हो । कतिल पागल भन्छ, पागलत हामीपो हौं जबकी झुठो आस्वासन देखाएर बेवास्था गरिदिन्छौं ।’
सरकार भन्छ डा. गोविन्द केसीको ९० प्रतिशत माग पूरा भै सक्यो । थापाले थपे, ‘मानिसको स्वास्थ्य पूर्ण रुपमा ठिक छ । तर, मुटु बिना बाच्न सम्भव हुन्छ ।’